Ungayicisha kanjani, uyiqale kabusha noma uyisebenzise kanjani i-iPhone X | Izindaba ze-IPhone
Ubuncane obukhulu, yilokho inkampani yaseCupertino ebikade ifuna ukukwenza nge-iPhone X, kangangoba sishiywe ngaphandle kwenkinobho yasekhaya ebonakalise amatheminali amaningi we-iPhone. Noma kunjalo, manje sekuqala ukuvela ukungabaza okuthile ngokusebenza nangezindlela zokuthinta ze-iPhone X, kepha ku-Actualidad iPhone sesifikile ukukunikeza ikhebuli.
Ngubani ongafuna ukucisha i-iPhone X? Ngeke wazi kodwa Namuhla sizokukhombisa ukuthi yimiphi imizila yokuvala, ukuqala kabusha noma ukusebenzisa i-iPhone X ngokuya ngezidingo zakho. Uma une-iPhone X nokungabaza okuningi, akufanele uphuthelwe yilesi sifundo esincane kodwa esidingekayo.
Lezi zenzo ezintathu azivamile ku-iOS, ngakho-ke singase sibe nokungabaza okuthile uma kuziwa ekwenzeni imisebenzi elula, ake siye lapho.
Ngingavala kanjani noma ngiqale kabusha i-iPhone X yami? Ukucisha i-iPhone X, ngokumangazayo, kuzofanele ukuthi sicindezele inkinobho yamandla (ohlangothini lwesokudla) nenkinobho yeVolumu + (ohlangothini lwesobunxele) cishe imizuzwana eyisithupha, ize ibonakale esikrinini "Slayida ukucisha", bese ukuslayida iswishi kuzocisha i-terminal ngokuphelele.
Ngingayiphoqa kanjani ukucisha i-iPhone X? Kwesinye isikhathi ifoni ibingabhajwa, ngoba lokhu kuzodingeka sisebenzise "ukucisha okuphoqiwe" okuhlangana kwayo ngokhiye okuthakazelisa impela. Kumele sicindezele futhi sikhiphe ivolumu phezulu, cindezela futhi sikhiphe ivolumu phansi bese ubamba inkinobho yamandla, bese kuthi ichibi le-Apple lizokhonjiswa bese i-terminal izoqala kabusha.
Ngisisebenzisa kanjani isikrini se-iPhone ngaphandle kokuyivula? Ukuze wenze lokhu, kufanele nje wenze ukuthinta okuncane kwemizuzwana emibili noma yikuphi esikrinini ngenkathi kukhiyiwe futhi sizobona isikrini sokukhiya.
Ziyizinqamuleli ezimbili zokufuna ukwaziIzinkinobho ezifanayo zisetshenziselwa zonke izinhlobo zezenzo zesibili ezifana nezithombe-skrini. Siyethemba futhi ukuthi okokufundisa kwethu kukusize ukuthi uphume ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iPhone » Okokufundisa namanyuwali » Ungayicisha kanjani, uyiqale kabusha noma uyivuse i-iPhone X
Ukuze wenze kusebenze isikrini awudingi ukuthintwa kwesibili, mane uthinte esikrinini "esijwayelekile".
ngqo ngokuthinta okulula kwanele. Unganiki umshini omude wokushicilela.
U-Apple usevele uxwayisa "ngesikrini esishisiwe" se-iPhone X